रद्दीटोकरीमा नछोड्नुहोस्: १ Business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू तपाईलाई कीपरलाई शिल्प बनाउन मद्दत गर्दछ - Print Peppermint
नोभेम्बर 28, 2019 | विज्ञापन, व्यापार, व्यापार कार्ड आधारभूत
१ Business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू तपाइँलाई एक विजेताको शिल्प बनाउन मद्दत पुर्‍याउनुहोस्
तपाइँ कसरी निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको व्यापार कार्ड देखियो? यसलाई अविस्मरणीय बनाएर। स्लिक। रचनात्मक यहाँ १ business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नु आवश्यक छ!
त्यहाँ थिए 30.2 मिलियन साना व्यवसाय २०१ 2018 मा संयुक्त राज्यमा।
यदि तपाइँ अमेरिका मा एक व्यवसाय को मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई व्यापार कार्ड चाहिन्छ। सोच्नुहोस् कि व्यापार कार्डहरू पुरानो शैलीको अवशेषहरू छन्? वास्तवमा, व्यापार कार्डहरू अझै प्रासंगिक छन् र आज व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी कहिलेकाँही डिजिटल शफलमा हराउन सक्छ। ब्यापार कार्डहरू तपाईको सम्पर्क जानकारी दिन सजिलो तरीका हो।
यदि तपाईं व्यावासायिक कार्ड डिजाइन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने – वा यदि तपाईं आफ्नो पुरानोलाई फेरि संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने - यो लेख तपाईंको लागि हो। १ business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरूको लागि पढिरहनुहोस्।
के हामीलाई अझै ब्यापार कार्डहरू चाहिएको छ?
हुनसक्छ तपाई सोचिरहनु भएको छ कि आज केहि डिजिटली स्टोर गरिएको छ सन्देशहरू, ईमेलहरू, रसिदहरू। जहाँसम्म, प्रिन्ट सामग्री को लागी अझै आवश्यक छ।
वास्तबमा, १० मध्ये9जना ग्राहकहरू विश्वास गर्नुहोस् कि मुद्रित सामग्रीको आवश्यकता छ। कागजको मूर्त भावनाको बारेमा केहि छ जुन व्यक्तिलाई सान्त्वना दिन्छ।
उदाहरण को लागी, e-book बनाम मुद्रित पुस्तक बहस हेर्नुहोस्। पुस्तक प्रेमीहरूले दावी गरे कि यो इलेक्ट्रोनिकसँग कर्ल गर्न उस्तै भावना हुँदैन। एक भौतिक पुस्तक को साथ, तपाईं यसलाई छुनुहोस् र पृष्ठहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ।
व्यापार कार्डको साथ पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। तपाईको फोनमा तपाईको नाम र नम्बर टाइप गर्नु भन्दा तपाईको व्यवसाय कार्ड तपाईलाई दिनु को लागी यो व्यक्तिगत हो।
के हुन्छ यदि तपाईंले गत वर्ष Joh जोन्सलाई भेट्नुभयो र तपाईंको फोनमा तिनीहरूको नाम र नम्बर इनपुट गर्नुहोस्। तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुनेछ कि कसले कम्पनीमा काम गर्छ जब सम्म तपाईं आफ्नो फोनमा नोट थप्न अतिरिक्त कदम चाल्नुहुन्न?
यदि तपाईंसँग उनीहरूको प्रत्येक व्यवसाय कार्ड छ भने तपाईंसँग त्यो समस्या हुने छैन। एक व्यापार कार्ड एक शारीरिक रिमाइन्डर को रूप मा कार्य गर्दछ।
शीर्ष व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू
के तपाईको व्यवसाय कार्डको डिजाईन र गुणवत्ता फरक पर्दछ? लगभग % Of 72% उनीहरूको ब्यापार कार्डको क्वालिटीको आधारमा व्यापार को न्याय गर्न भन्छन।
डिजाइन मामिलाहरू। यहाँ तपाईंको व्यवसाय कार्ड राम्रो देखाउनको लागि सल्लाहहरू छन्।
१. तपाईंको ब्रान्ड प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो कार्ड डिजाइन गर्नु अघि, तपाईंको कम्पनीको ब्रान्डको बारेमा सोच्नुहोस्। एउटा कम्पनीको ब्रान्ड यसको रंग योजना र ट्यागलाइन भन्दा बढी छ। यो तपाईको कम्पनीले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कुरा हो।
तपाईंको ब्रान्ड तपाईंको उत्पादनहरू र तपाईंको सेवाहरू हो। यो तपाईंको ग्राहक सेवा हो। यो उनीहरूको लोगो वा कम्पनीको नाम देख्दा के सोच्दछन्।
तपाइँ कसरी एक व्यापार कार्ड मा तपाइँको ब्रान्ड प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। यो कागजको सानो टुक्रामा प्रतिबिम्बित गर्न धेरै नै लाग्न सक्छ।
जहाँसम्म, यदि सही भयो भने, तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिलाई तपाईंको ब्रान्डको स्वाद दिन। तपाइँ तपाइँ तपाइँको कार्ड हेर्न र तपाइँको कम्पनी के बारे मा छ को लागी एक विचार छ।
२. रंगका साथ पागल नहुनुहोस्
यो पागल, नियन र with्गको साथ एक व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न लोभलागी हुन सक्छ ताकि यो बाहिर आउन सक्दछ। यद्यपि तपाईले रंगहरू छनौट गर्नु पर्छ जुन तपाईको ब्रान्डको एक हिस्सा हो।
तपाईं र colors्ग पनि चाहानुहुन्छ जुन एक अर्काको पूरक हुन्छ र मानिसहरूलाई पाठ पढ्न सजिलो बनाउँदछ।
Both. दुबै साइड प्रयोग गर्नुहोस्
व्यापार कार्डको साथ, सबै घर जग्गाको सक्दो फाइदा लिनुहोस् र दुबै पक्ष प्रयोग गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही तपाई ब्यापार कार्ड पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईको वालेटमा वा तपाईंको डेस्कमा कतै तल राख्नुहोस्। यदि छेउछाउमा भएको ठाउँ खाली छ भने, तपाईले कार्ड वा व्यवसाय जानकारी यसमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो नाम, सम्पर्क विवरण, र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रिन्ट गर्न एक पक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
तपाईं पछाडि आफ्नो लोगो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाईं आफ्नो ट्यागलाइन प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को विकल्प भनेको छवि छाप्नु हो वा केहि आखाँ आकर्षक।
Sure. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लोगो प्रदर्शित छ
तपाइँको कार्डमा तपाइँको लोगो प्रिन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईंले लोगो कम्पनीको नामको छेउमा राख्नु पर्छ।
लोगो ध्यान गर्न पर्याप्त ठूलो हुनुपर्छ। सबै पछि, तपाईंको कम्पनी लोगो तपाईंको ब्रान्डको प्रतिनिधित्व हो।
An. एक उपयुक्त फन्ट छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसाय कार्डको मामिलाको टाइपोग्राफी। विचार गर्न पहिलो कुरा फन्ट विकल्प हो। हामीलाई थाहा छ कि फन्ट छनौट महत्त्वपूर्ण छ।
टाइम्स न्यू रोमन फन्ट वा कमिक सान्स फन्ट प्रयोग गरेर टाइप गरिएको पुनःसुरुको बारेमा सोच्नुहोस्। फन्टले फरक पार्छ। हास्य सान्स अधिक चंचल र टाइम्स न्यू रोमन भन्दा कम गम्भीर छ।
बिभिन्न फन्टहरूमा हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको टोन र सौन्दर्यसँग मेल खान्छ। हुनसक्छ तपाईं एक चंचल, रमाईलो प्रतिबिम्बित गर्न चाहनुहुन्छ। वा, हुनसक्छ तपाई गम्भीर टोन चाहनुहुन्छ।
व्यापार कार्डका लागि एक लोकप्रिय फन्ट विकल्प हेल्वेटिका हो। अर्को Futura छ।
कसरी फन्ट आकार को बारे मा। तपाईं सजिलैसँग पढ्नको लागि फन्ट ठूलो भएको चाहनुहुन्छ, तर सबै खाली ठाउँ लिन पर्याप्त सानो छैन। फन्ट आकार about-7 pt को बारे मा हुनु पर्छ।
Quality. गुणस्तरीय सामग्री छनौट गर्नुहोस्
करीव%%% उपभोक्ताहरूले भने कि तिनीहरू कसैसँग व्यवसाय गर्न अस्वीकार गर्छन् यदि तिनीहरूसँग सस्तो देखिने व्यापार कार्ड छ भने।
तपाइँको ब्यापार कार्ड प्रिन्ट गर्दा, गुणस्तर कागज स्टक छनौट गर्नुहोस् जुन अप्ठ्यारो छैन। कल्पना गर्नुहोस् जब तपाईं कसैलाई भेट्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको व्यावसाय कार्ड दिनुहोस्। तपाइँ चाहानुहुन्छ कि तपाइँको कार्डले यसलाई समात्दा बलियो र भारी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले राम्रो पहिलो प्रभाव बनाउने अर्को मौका प्राप्त गर्नुहुन्न।
Important. महत्त्वपूर्ण विवरण समावेश गर्नुहोस्
तपाईंको कम्पनीको नाम र लोगो बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण विवरणहरू समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। केहि जानकारी तपाईले सामेल गर्न चाहानुहुन्छ तपाईंको फोन नम्बर, ईमेल, र वेबसाइट हुन सक्छ।
यदि प्रासंगिक हो भने, तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया खाता नामहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ यदि तपाईं मार्केटिंग हुनुहुन्छ वा यदि तपाईंको एक खातामा तपाईंसँग अनलाइन पोर्टफोलियो छ।
Creative. डिजाइनका साथ रचनात्मक हुनुहोस्
तपाईंको व्यापार कार्ड डिजाइनको साथ रचनात्मक हुनुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक किताब को स्टोर को मालिक हुनुहुन्छ, तपाईंको व्यापार कार्ड बुकमार्क हुन सक्छ। तपाईं पज्जल वा शब्द गेमहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको कार्डको पछाडि मानिसहरू समाधान गर्नका लागि।
यदि तपाईंसँग एक रेस्टुरेन्ट छ भने, तपाईं आफ्नो कार्डमा एक नुस्खा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको ब्यापार कार्डलाई पंच कार्ड वा अपोइन्टमेन्ट रिमाइन्डर कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँको कार्ड बहु-फंक्शनल बनाउँदै हुनुहुन्छ।
Special। विशेष प्रभावहरु लाई ध्यान दिनुहोस्
त्यहाँ विशेष प्रभावहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो कार्डमा गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसलाई छुट्ट्याउनको लागि। तपाइँ तत्वहरू थप्न सक्नुहुन्छ जस्तै पन्नी डिजाइन र एक्सेन्टहरू। त्यहाँ व्यावहारिक कार्ड डिजाइनहरू पनि छन्।
१०. आकार र आकार छनौट गर्नुहोस्
व्यापार कार्डका लागि सामान्य आकार 3.5. x x २ ईन्च हुन्छ। तपाईं अलग आकार गर्न बाहिर चाहानुहुन्छ। जे होस्, मानक आकार सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो किनभने तिनीहरू तपाईंको वालेट वा व्यवसाय कार्ड होल्डरमा फिट हुन्छन्।
११. ट्यागलाइन छ
यदि तपाईंको कम्पनीसँग ट्यागलाइन छ भने, तपाईं त्यसलाई आफ्नो कार्डमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। सबै कम्पनीको एक हुँदैन। ट्यागलाइन तपाईंको कम्पनीको ब्रान्डको अर्को अंश हो।
यो तपाइँको कम्पनी को बारे मा छ को एक विचार हो। राम्रो ट्यागलाइन सम्झन को लागी सरल तर सजिलो छ।
१२. दृश्यहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ पक्का हुनुहुन्न कि तपाइँको कार्डको पछाडि के समावेश गर्ने हो भने, तपाइँ छवि थप्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग जान सक्दछ यदि यो एक पेशेवर फोटोग्राफर वा एक संग्रहालय जस्तै तपाइँको कम्पनीको ब्रान्ड संग मेल खान्छ।
13। यसलाई सरल राख्नुहोस्
यो तपाइँको डिजाईन मा तपाइँका सबै विचारहरू समावेश गर्न आकर्षक छ। जहाँसम्म, तपाईं एक व्यापार कार्ड चाहनुहुन्न कि अव्यवस्थित देखिन्छ वा त्यो धेरै बढिरहेको छ।
कसैले तपाइँको कार्ड हेर्नु पर्छ र तपाइँको कम्पनी को बारे मा छ विचार।
यदि तपाइँको टाउको मा धेरै विचारहरु छन् भने, यसले पहिले एउटा डिजाईन स्केच गर्न मद्दत गर्दछ। यस तरीकाले तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाई आफ्नो जानकारी कहाँ राख्न चाहानुहुन्छ र कसरी तपाई यसलाई बाहिर राख्न चाहानुहुन्छ।
तपाईको सेतो खाली ठाउँको पनि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ तपाईको कार्ड जस्तै सानो। यदि तपाईं सेतो खाली ठाउँ बिना सबै पाठहरू क्र्याम गर्नुहोस् भने, यो पढ्न गाह्रो हुनेछ। व्यक्तिहरूले तपाईको ईमेल वा फोन नम्बर स्पट गर्न सक्षम हुनुपर्दछ यो खोज बिना।
१.. जाँच गर्नु भन्दा पहिले तपाई अन्तिम गर्नु हुन्छ
तपाईं डिजाइन अन्तिम छ वा प्रिन्ट गर्नु अघि, यसलाई पहिले जाँच गर्नुहोस्। यो प्रिन्ट हुँदा कसरी देखा पर्दछ हेर्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने, हेर्नुहोस् यदि तपाईं परीक्षण प्रिन्ट नमूना गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै कुनै पनि त्रुटि वा व्याकरण गल्तीहरूका लागि हिज्जे जाँच गर्नुहोस्। तपाईले चाहानु भएको अन्तिम कुरा भनेको अर्डरलाई अन्तिम रूप दिइसके पछि तपाईले हिज्जे गल्ती गरेको देख्नु हो।
१.. एक पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर भाँडा
जब तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्ड सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईंले भाँडा लिनु पर्छ पेशेवर यसलाई डिजाइन गर्न। तपाईको व्यवसाय कार्ड तपाईको कम्पनीमा मानिस परिचय हुने पहिलो तरीका मध्ये एक हो - त्यसैले तपाईले गुणस्तरीय कार्ड सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाइँले तपाइँको कार्डaसँग पनि छाप्नु पर्छ गुणस्तरीय मुद्रण कम्पनी। एक सस्तो वा कम गुणस्तरको मुद्रण कार्य तपाइँको कार्डमा देखाउँनेछ।
व्यवसाय कार्ड डिजाइनिंगमा अन्तिम विचारहरू
माथिको व्यापार कार्ड डिजाइन सल्लाहहरूको साथ, तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्ड डिजाइन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
व्यापार कार्ड र अन्य ग्राफिक डिजाइन संसाधनहरूको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ? थप जाँच गर्नुहोस् हाम्रो ब्लगमा लेखहरू.
Phot फोटोग्राफरहरूको लागि SEO: SEO Newbies को लागी १२ सल्लाहहरू
किन तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान for को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर मा लगानी गर्न आवश्यकता छ